Showing ८१-९० of ६५२ items.
जसले सलमान खानलाई जेलसम्म पुर्‍याए
एजेन्सी । दुर्लभ वन्यजन्तु हरिणको शिकार गरेर एक दिन जेल बसेका बलिउड स्टार सलमान खानको विषयले अहिले सञ्चार माध्यम तताएको छ। अदालतले उनलाई ५० हजार धरौटीमा जेलबाट छुटकारका दिएको छ। तर बलिउड स्टार सलमानलाई यही मुद्दामा बीस वर्षसम्म तनावमा राख्ने को हुन् भन्ने सबैलाई जिज्ञासा हुन्छ। त्यही एक समुदाय हो जसले सलमानलाई घुँडा टेकाएरै छाडे। बिश्नोइ समुदायका मानिस वन्यजन्तु र बोटबिरूवाका लागि ज्यान दिन पनि तयार हुन्छन्। बलिउड चलचित्र अभिनेता सलमान खानले कृष्णसार मारेको विवरणबाहिर आएपछि उनीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। बिश्नोइ समुदायका मानिस आफ्ना आराध्य गुरू जम्भेश्वरले भनेका २९ वटा नियमहरूको पालना गर्छन्। बिय
भारतको उत्तर प्रदेशमा जन्मिएका अमिताभ बच्चनको जीवनका केही कथाहरू धेरैलाई थाहा नभएको हुन सक्छ । यस्तै एउटा कथा यहाँ हामी बताउँछौं । अमिताभ आफ्ना पिता हरिवंश राय बच्चन, आमा तेजी र भाइ अजिताभसँग दशद्वारमा बस्थे । यो इलाहाबादको क्लाइभ रोडमा थियो । रोडनजिकै रानी बेतियाको एक कोठी थियो जसको ढोका सधैं बन्द हुन्थ्यो र एउटा पालेले सधैं पहरा दिन्थ्यो । अमिताभ यो कोठीमा जान चाहन्थे किनकि उनले साथीहरूसँग कोठी र रानीका बारेमा धेरै कुरा सुनेका थिए । एक दिन आफ्ना दुई साथीहरू शशि र नरेशका साथ उनी पालेकहाँ पुगे र कोठीभित्र जाने अनुमति मागे । पालेले २५ पैसा दिने भए कोठीमा जान दिन्छु भने । धेरै सोचविचार
कपिल शर्मा फेरि विवादमा, पत्रकारलाई धम्की
हास्यकलाकार कपिल शर्मा फेरि विवादमा परेका छन् । मुम्बइमा एक पत्रकारसँग झगडापछि उनी विवादमा फसेका छन् । एक मनोरञ्जन न्यूज वेभसाइटका अनुसार कपिल शर्माले उनका प्रमुख सम्पादक विक्की लालवानीलाई फोनमा धम्की दिएर गाली गरेका थिए । उता कपिल शर्माले लालवानीसमेत तीन जना विरुद्ध प्रहरीसमक्ष उजुरी गरेका छन् । समाचारले एक अडियो टेप पनि सार्वजनिक गरेको छ जसमा कपिल शर्माले अभद्र टिप्पणी गरेको सुनिएको छ । स्पटव्याइका सम्पादक विक्की लालवानीले बताए,‘गए राति अफिसमा बसिरहेका थियो ६ बजे कपिल शर्माले फोन गरे । फोन उठाउनासाथ उनले गाली गर्न शुरु गरे ।’ लालवानीका अनुसार कपिल शर्माले उनकी आमा र छोरीका
बद्रीले आमाहरुलाई रुवाए, नेता चन्द्र भण्डारी पनि स्तब्ध
गुल्मी । कृषि पर्यटन र उद्योगको व्यापार प्रर्वद्धन गर्न भन्दै गुल्मीमा चलेको तेस्रो गुल्मी महोत्सवमा लोक दोहोरी गायक बद्री पंगेनीले गीत गाउँदा मञ्चमा बसेका नेता स्तब्ध भए भने दर्शकको आशु थामिएन । महोत्सवको आइतवार १० औं दिनका मुख्य आकर्षक बनेका गायक पंगेनीले महोत्वको प्रमुख अतिथिमा मञ्च बसेका नेपाली कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीलाई देख्न साथ उनले नेता ज्यू खैत हाम्रो गाउँमा आएको जस्ता गीतहरु मार्फत प्रतस्तुत गरेका थिए । उनले गीत मार्फत धेरै सन्देश मुलक कुरा थपे तब कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी झनै स्तब्ध भए । गीत गाउँदै गरेका गायक पंगेनीलाई कांगे्रस नेता भण्डारीले आफूले लाएको माला समेत लगाइ दिए
करुणाजी, नमस्कार । म नेपालका लागि समुन्द्रपार व्यवसायी हुँ । ४७ वर्षीय म निकै आकर्षक पुरुष हुँ भन्ने कुरा मेरा महिला मित्रहरु भन्ने गर्छन् । व्यवसायका लागि देश–देशावर घुम्नुपर्ने भएकाले धेरै महिला मित्रहरुसँग शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । विदेशमा हुँदा एकपल्ट चिनजान भएपछि थोरै समयमा पनि मेरा मित्रहरु यौन सम्पर्कका लागि तयार हुन्छन् । नेपालमा पनि महिला मित्रहरुसँग बेला बेलामा अचानक सम्बन्ध स्थापित हुनपुग्छ । म कहिल्यै पनि यौनका लागि पैसा वा कुनै किसिमको सेवा प्रदान गर्दिनँ । तैपनि महिलाहरु मसँग किन आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा सधैं जिज्ञासा रहन्छ । विशेष गरी एकपटक सम्बन्ध स्थापित भएका साथीहरु
राजेश हमाल ३ करोड बजेटको फिल्म निर्देशन गर्दै , नायिका को ?
महानायकको दर्जा पाएका राजेश हमाल यतिबेला टाढै छन् । उनको पछिल्लो चलचित्र ‘सकुन्तला’ असफलभएपछि उनी अभिनयबाट भने टाढा छन् । उनका सहोदर नायकहरु फिल्म निर्माण तथा निर्देशनमा होमिईसक्दा राजेश भने चलचित्र क्षेत्रबाट नै टाढा रहँदा उनको महानायकको उपाधीमा नै प्रश्न उठ्न थालेको थियो । त्यसोत धेरै पहिलेदेखि राजेशले फिल्म निर्देशन गर्ने खबरहरु बाहिरिएको थियो तर फिल्मको कुनै चाँजोपाँजो नदेख्दा राजेशले निर्देशन गर्ने खबर खबरमै सिमीत थियो । तर अब फाईनली राजेशले निर्देशन गर्ने कुरा पक्का भएको छ । हाल सम्म नाम सार्वजनिक नगरिएको एक चलचित्रलाई राजेशले निर्देशन गर्ने भएका छन् । करिब ३ करोडको बजेटमा अमेरिकामा बस
दिपकराज गिरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कलाकार भनेपछि...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणमा जाने आफ्नो टोलीमा दुई कलाकारलाई पनि समावेश गरेका छन् । धेरै कलाकर्मीलाई यसले खुशी तुल्याएको छ । तर, हास्यकलाकार दीपकराज गिरीले भने घुमाउरो तरिकाले प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘कलाकार’ को संज्ञा दिए । ‘कलाकारको महत्व कलाकारले नै बुझ्छ भन्थे, केपीले बुझेछन्, आफ्नो भ्रमण दलमा कलाकारलाई राखेर (धन्यवाद) ।’ तर गिरीले यो स्टाटसमा ती प्रतिक्रियाको सामना गर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिलाई होच्याउन खोजेको भनेर धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । उनको स्टाटसमा दुई सय २५ भन्दा बढी कमेन्ट आए
हनिमुन मनाउँदै अशिष्मा
गत फागुन २९ गते बैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी नायिका अशिष्मा नकर्मी यतिबेला आफनो बैवाहिक जीवनको सुखमा रमाईरहेकीछिन् । अशिष्माले अमेरिकामा बसोबास गर्दे आईरहेका नयाँ बानेश्वर निवासी व्यापारी नविन चन्द्र प्रधान संग मागी बिवाह गरेकी हुन् । यतिबेला बल्ल आशिष्माले पतिसंग हनिमुन मनाईरहेकीछिन् । उनले उनले पोखरमा क्लिक गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर सेयर गरेकी हुन् । कम समयमा नै परिवारको रोजाईमा नै उनले बिवाह गरेकी हुन् । नेपाल भाषाको चलचित्र , म्युजिक भिडियो र नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेकी अशिष्माले आफनो फिल्मी करियरमा भने खासै चर्चा कमाउँन सकिनन् । बिवाहपछि चलचित्र क्षेत्रमा फर्कने वा नफर्कने भन्नेबारे
‘शत्रु गते’ हेर्न नेता नेपाल र श्रेष्ठ सिनेमा हलमा
सधैँ राजनीतिक बैठक र कार्यक्रममा व्यस्त हुने दुई नेता शुक्रबार साँझ नेपाली चलचित्र ‘शत्रु गते’ को दर्शक बन्न भ्याउनु भएको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बागबजारस्थित सिटी म्याक्समा पुगेर दुई घण्टा ‘शत्रु गते’ हेर्नुभएको हो । चलचित्र हेरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले चलचित्र सामाजिक परिवेशलाई आधार बनाएको हुनाले राम्रो सन्देश दिएको बताउनुभयो । उहाँले चलचित्रले दाइजो प्रथा, घरछिमेकी सँगको सम्बन्धबारे जान दिएको बताउनुभयो । आफू राम्रो सामाजिक घटना प्रधानका चलचित्र हेर्न गरेको बताउँदै उहाँले ‘शत्रु गते’ पनि राम्रो सुनेर हेर्न आए